Takian’ny ao Bahrain Ny Fandraketana Ny Tranonkala ; Manahy Ireo Blaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2017 11:24 GMT
Angatahan'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao ao Bahrain ireo rehetra tranonkala Bahraini – izay ao anatiny na ivelan'ny firenena – mba hisoratra anarana ao amin'ny Ministera. Ho tomponandraikitra ara-dalàna amin'ny votoaty zarainy eo amin'ny tranonkalany ireo Mpitantana Tranonkala, ary hiatrika fanenjehana eo ambanin'ny lalàna Fanaovana gazety sy Fizarana Votoaty ao amin'ny firenena raha toa ka tsy misoratra anarana. Nanamarika ny OpenNet Initiative nandritra ny fandalinany mikasika ny sivana atao amin'ny Aterineto ao Bahrain fa efa nisakana sahady ny fidiran'ny olontsotra amin'ny tranonkala sasany ilay firenena ary mampiasa hery famoretana ara-dalàna sy tsy ara-dalàna ihany koa mba hanarahany maso ny votoaty ao amin'ny Aterineto.
Matahotra ireo Bahraini mpitoraka blaogy, indrindra taorian'ny fisamborana ny mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny tranonkala bahrainonline :
Manoratra i “Silly Bahraini Girl” :
Voaisa ny androntsika…. Ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahalalahana sy ny demokrasia, novolavolain'ny lalam-panorenana vaovao sy fanavaozana izay mbola tsy fantatra n'aiza n'aiza eran-tany taloha ary tsy ho hita intsony na aiza na aiza raha toa ka mbola ho velona isika sy ny zanatsika sy ny zafikelintsika ary ireo zanaky ny zafikelintsika, namoaka fomba vaovao hanafoanana ny FAHALALAHANA MANEHO HEVITRA ny Ministeran'ny Fampahalalam-baovao.
Manome tsiny ny Parlemanta ”tsy mahefa” ao Bahrain i Mahmood Al-Yousif:
Amin'ny maha-fanampiny iray manandanja ilay ministera an'i Bahrain, tsy afaka ny ho tonga samirery tamin'ity famaranana ity mihitsy ny Inc., ry zareo (ny fanjakana iray manontolo) dia tsy maintsy mbola tonga saina ihany tamin'ny fipatitahan'ny bahrainonline.org, raha toa ka hieritreritra in-droa mikasika ny famoahana indray dokam-barotra ratsy ny olona salama saina amin'ny fiezahana hifehy ny zavatra vita printy, amin'ity indray mitoraka ity kosa dia toa nandroso dingana iray bebe kokoa ry zareo ary maniry ny hanasazy antsika noho ny eritreritsika ihany koa.
Manolotra dingana telo izy: manao ankivy ny fisoratana anarana, mikarakara fanangonan-tsonia amin'ny tambajotra, ary manao famoriana eo amin'ireo Mpitantana Tranonkala hisianà drafitra mandeha lavidavitra kokoa. Manoratra i Chan'ad Bahraini fa manohintohina ny filazany fa nampiakatra ny fahalalahana maneho hevitra ny Mpanjaka Hamad ary manolotra hevitra ny hanakatonana ilay Misitera mihitsy.
Mahita izany hetsika izany ho anisan'ny iray amin'ireo onja manorisory ny fihodinan'ny fahalalahana i Babbling Bahrainia, am-panamarihana fa manolotra lalàna manohitra ny hetsika fampihorohoroana ihany koa ny fanjakana amin'ny fameperana ny fanehoana hevitra sy ny fandraràna ny famoahana ny anaran'ny voampanga mialohan'ny hivoahan'ny valim-pitsaràna amin'ny raharaha iray:
Tena manamarina ihany koa aho fa ity folo taona ity, na dia mizara ireo endriky ny tsingerina teo aloha aza, dia miatrika toejavatra tsy manam-paharoa izay ao anatiny izay mitranga amin'izao fotoana izao dia FANAMAFISANA ao anatin'ny lalàna eo imasontsika ny fanjakan'olontokana; amin'ny alalan'ny lalàm-panorenana, didy amam-pitsipiky ny fanjakana, lalàna fanaovana gazety, lalàna 56 sns, izay tena milaza ivelany fa olona iray ihany no manjaka eo amin'ity firenena ity. Mpisava làlana io.
Misy fivoarana mampanahy (raha tsy hoe ianao angaha no Bahrain Tribune, izay mahita izany ho toy ny fomba ” mba hiantohana tontolom-pandraharahàna tsaratsara kokoa, hanosika ny fampandrosoana ara-tsosialy ary hiaro ny zon'olombelona sy ny fahalalahana amin'ny Fanaovana gazety”). Mitohy any amin'ny Mahmood's Den ny resaka, miaraka amin'ny soso-kevitra hampitomboana ny isan'ny blaogy mba hahatototra ireo mpandrindra.